NASIIB DARRO: Sh. Shariif oo wada dadaal lagu heshiinayo labadii hay’adood oo iyaga sare loo eegi lahaa + Sawirro | Hadalsame Media
Home Wararka NASIIB DARRO: Sh. Shariif oo wada dadaal lagu heshiinayo labadii hay’adood oo...
NASIIB DARRO: Sh. Shariif oo wada dadaal lagu heshiinayo labadii hay’adood oo iyaga sare loo eegi lahaa + Sawirro
Madaxweynihii hore ee Dowladii KMG Shariif Shiekh Axmed ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay kulamo uu ku doonayo in uu ku dhaxdhaxaadiyo Guddoonka labada aqal ee Barlamaanka.
Shariif Shiekh Axmed ayaa xalay la kulmay Guddoomiyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare Maxamed Mursal iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, waxa ayna isla soo qadeen dhamaynta khilaafka labada Guddoomiye.
Sidoo kale waxyaabaha ay isla soo qaadeen saddaxda dhinac waxa ka mid ah dhamaystirka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka dalka ee 2021-ka.
Waxa ku wehliyay kulankan Shariif Shiekh xubno ka mid ah Barlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ku jira xisbigiisa siyaasadeed ee Himilo Qaran.
Shariif ayaa ballan qaaday inta uu kulankan uu socday in uu gacan wayn ka gaysan doono hannaanka geeddi socodka dowladnimada dalka.
Waloow ay tani tahay tillaabo wanaagsan misna waxaan la fahmi karin isla markaana aan dadwaynaha weli loo sharrixin waxa shakhsiyaynaya shaqada labadan hay’adood ee ku soo koobaya khilaaf u dhexeeyo laba qofood.
Previous articleDAAWO: ”Waa DIRAC, mayee waa dib u socod!” – Musharraxnimada gabar Muslimad ah oo dood ka oogtey dalka Talyaaniga + Sawirro
Next articleWAR CUSUB: Xaalad Deg Deg ah oo lagu soo rogey degmooyin ka tirsan Somaliland (Muddada uu soconayo & sababta)